दोस्रो पुस्ता हावि हुँदै ~ The Nepal Romania
केहिवर्ष अगाडिका खुब नाम चलेका अभिनेता तथा अभिनेतृहरु अहिले विस्तारै हराउन थालेका छन् । उनीहरुको ठाउँ नयाँ, चकलेटी र फिल्मको गहिरो अध्ययन गरि आएका अनुहारले प्रतिस्थापन गर्दै छ । अहिले पुरानामाथि नयाँ हावि हुने कारण यस्तो छ : कोही बलिउडमा हाम फाल्ने सोंचकासाथ हिँडे भने कोही पारिवारिक कारणले । एक्सन हिरोको रुपमा स्थापित विराज भट्ट र निखिल उप्रेती नेपाली सिने उद्योगलाई टाटा-बाइबाइ गर्ने सुरमा छन् । यसैगरी उषा पौडेल, निरुता, झरना र निखिल पत्नी संचिता जस्ता अभिनेतृहरु पनि पलायन हुँदै छन् । तर पुराना राजेश हमालको क्रेज भने कहिँ कतै पनि कम भएको महशुस भएको छैन ।विराज र निखिललाई राजबल्लभ, कर्मा, आर्यन, जस्ता अभिनेताहरुले प्रतिस्थापन गर्दै छन् निरुता, संचिता, झरना र उषालाई केकी, बेनिशा नम्रता, माल्भिका जस्ताले प्रतिस्थापन गर्दै छन् ।विराज भट्ट विशेष गरि पारिश्रमिकको कारण भोजपुरी फिल्मतिर आकर्षित हुँदै छन् । 'हिम्मत२''न बिर्सें तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई' 'तिमीबिनाको जीवन''चिनो' लगायतका उनका फिल्महरु फ्लप भए । हो पनि 'म विस्थापित हुने पो हो कि !' भन्ने डरले उनलाई सतायो होला ।
निखिल उप्रेती पनि यही बाटो हिँड्दै छन् । संचितासँग विवाह गरेर मुम्बइ छिरेका निखिल अनेक वहाना बनाएर नेपाली सिनेमा नखेल्ने सुरमा छन् । उनी कहिले उच्च पारिश्रमिक माग गरेर त कहिले 'फुर्सद छैन' भनेर टाढिँदै छन् ।
निखिलको 'दशगजा' र 'जयशिव शंकर' आउँदो शुक्रबार रिलिज हुँदैछ भने विराजअभिनित 'विरताको चिनो', 'जयशिव शंकर' सिनेमा पनि सोही दिन रिलिज हुँदै छन् । थोरै सिनेमा बन्ने उद्योगमा धेरै सिनेमा एकैदिन रिलिज हुँदा दर्शक बाँडिने कारण निर्मातालाई पनि आर्थिक रुपमा धेरै फाइदा नहुने निश्चित छ ।'चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरि' भन्ने उखान नायिका संचिता लुइटेल र निरुता सिँहमा लागू हुन्छ । कुनै समय निरुताविना फिल्म नै बन्दैनथे । नयाँले विस्थापित गरेपछि निरुता बलिउड छिर्ने उद्देश्यसाथ नेपाल छाडिन् । इन्टेरियर डिजाइनिङ पढेर बलिउड छिर्ने उनको उद्देश्य पनि अन्तत सफल भएन । निरुता इन्टेरियर डिजाइनिङमा पनि राम्रो गर्न नसकेपछि अहिले आपतमा छिन् । संचिता पनि यसो भन्छिन् 'अब सिनेमामा लाग्दिन होला' । बलिउड प्रवेशको उनको उद्देश्य यति सजिलै सफल हुने छाँट पनि देखिँदैन । 'दागु', 'बन्दी' लगायतका उनले खेलेका पछिल्ला केही सिनेमाहरु पनि लगालग फ्लप भए ।हुन त उषा पौडेल पनि नेपाली सिनेमामा नयाँ अनुहार नै हुन् । महाकवि देवकोटाको कृति मुनामदनमा 'मुना'को भूमिकाबाट केही ट्याग भिरेकी उषा पौडेलको अभिनयले बक्स अफिसमा कमाल गर्न सकेन । त्यसैले निर्माताहरु उनलाई प्रमुख भूमिकामा राख्न चाख पनि देखाउँदैनन् । उषा पनि बलिउडको स्वाद चाख्ने उद्देश्यले उतै अभिनय सिकिरहेको बताउँछिन् । यसैगरी झरना बज्राचार्यका एकाधबाहेक सबै सिनेमा फ्लप भए । अनि उनलाई कुन निर्माताले लिइदिने? दर्शकले नै मन नपराएपछि । झरनाको अवस्था त अघोषित सन्यास नै लिएको जस्तो भैसक्यो ।यी पुरानालाई छेउ लाएर नम्राता श्रेष्ठ, कर्म, आर्यन सिग्देल, केकी अधिकारी, बेनिशा हमाल,जीवन लुइटेल, राजबल्लभ कोइराला जस्ता अनुहार पर्दामा लगालग देखिन थालेका छन् । पुराना अनुहार विस्थापित भएर नयाँले ठाउँ पाउने भनेको आफैँमा राम्रो पक्ष त हो । तर पुरानाहरु यहाँबाट विरक्तिएको कारणको अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । किनकि आजका नयाँ अनुहार पनि भोलि उसैगरी हराए भने सिनेमा उद्योगको अस्तित्वमाथि नै संकट आइपर्ने निश्चित छ ।पुरानाले नयाँलाई विस्थापित गर्नु परेको कारणहरु विविध हुन सक्छन् । दर्शकले चाहेअनुसारको भूमिका परिवर्तन गर्न नसक्ने चाहिँ प्रमुख कारण हुन सक्छ । यसैगरी नयाँ पुस्ताका अभिनेता तथा अभिनेतृहरु सिनेमाको गहिरो अध्ययन पश्चात् यो क्षेत्रमा हाम फालेकाले पनि उनीहरु यो क्षेत्रमा स्थापित हुन थालेका हुन् ।